Fampandrenesana maika avy amin'ny masoivoho momba ny Coronavirus.
Dia mba ampitampitampitao ho an'ny besinimaro azafady.tohiny
Fihaonamben'ny Malagasy aty am-pielezana.
Manentana antsika Malagasy aty Italia ny masoivohon'i Madagasikara eto Roma mba handraisantsika anjara feno amin'ilay Fihaonamben'ny Malagasy aty am-pielezana, andiany faharoa, izay hatao amin'ny volana aogositra 2020 ao Antananarivo. Ampitao ny hafatra ho an'izay tsy mahita ity.tohiny
Fampitam-baovao fanavaozana pasipaoro
Ny Masoivohon’i Madagasikara eto Italia dia mampita amin’ny teratany malagasy rehetra monina eto Italia fa manomboka ny FANAVAOZANA PASIPAORO ANDIANY VOALOHANY ho an’ireo pasipaoro NOMENA TAORIAN’NY TAONA 2014 Ireto avy ireo antotan-taratasy ilaina amin’izany ary afaka aterina mivantana eto amin’ny... tohiny
Lasa namonjy iny habakabaka iny i Amédé namantsika.
Amin'ny fo feno alahelo no ampandrenesana antsika fa lasa namonjy iny habakabaka iny omaly alahady 29 desambra 2019 ny namantsika Amédé RAKOTOARISON. Hisy fotoam-bavaka hatao ho fialan-tsasatry ny fanahiny ny alarobia 1 janoary 2020 amin'ny 3 ora tolakandro ao amin'ny foiben'ny masoivoho, via... tohiny
Filazana manjo : nodimandry i dada Manoelina Ratsimananda.
​Laroim-bahona indray ny fiarahamonintsika zanaka am-pielezana atý Italia fa nandao antsika tampoka tamin'ny alahady 25 aogositra teo i dada Manoelina RATSIMANANDA , rain'i Rado sy Hery ary Mahefa . Ny fianakaviana eto Roma dia manolotra fisaorana anareo rehetra niantso sy tonga nidodododo niombona... tohiny
Takarivam-pikoranana nisaorana an'andriamatoa Dama Rakotondrasedo mivady
Manolotra avy hatrany ny fialan-tsiny tanteraka amin'ireo tsy tratr'antso tamin'ity korana kely ity izay natao hisaorana ny Zoky Raiamandrenintsika, andriamatoa Dama Rakotondrasedo mivady, satria amin'ny naha "surprise" azy dia tsy afaka natao resaka imasom-bahoaka ilay izy tao amin'ny facebook... tohiny
Mompera Alain nankalaza ny 15 taona naha-mpisoron'ny Avo azy.
Feno 15 taona tamin'ny volana mey ny nanosorona ho mpisoron'ny Avo an'i mompera Alain Velomaroson ka ny alahady 16 jiona teo, tao amin'ny Ankohonana Victoire Rasoamanarivo eto Roma, no nisafidianany hankalazana izany niaraka tamin'ireo namana sy tapaka sy ireo relijiozy rahalahiny sy anabaviny ao... tohiny
Fetin'ny Fahaleovantena malagasy eto Roma.
Ny sabotsy 29 jiona 2019 manomboka amin'ny 5 ora hariva no hanasana antsika rehetra amin'ny fankalazana ny fetim-pirenena ao amin'ny foiben'ny masoivoho, via Riccardo Zandonai 84 , Roma.tohiny
Fetin'ny Fahaleovantena malagasy any Torino.
Hanamarihana ny fahafolo taona nijoroan'ny Fikambanana "Malagasy Miray" sy ny faha-59 taona nahazoan'i Madagasikara ny fahaleovantena no hanatontosana ny "Giornata del Madagascar" fanao isan-taona any Torino ka hanasana antsika rehetra ny sabotsy 29 jiona 2019.tohiny
Fihaonana tamin'andriamatoa Ministry ny Raharahambahiny, Naina Andriantsitohaina.
Fenofeno ihany moa ny fandaharam-potoanan’Andriamatoa ministry ny Raharahambahiny, Naina Andriantsitohaina, satria ankoatran’ny fandinihana ny hanamafisana ny Fiaraha-miasan’i Italia sy Madagasikara izay isan'ny tena anton-diany, dia ao koa ireo fivoriana hoatrehany toy ny ao amin’ny IFAD/FIDA (... tohiny
Fetin'ny Fahaleovantena malagasy any Milan.
Tonga ity ilay andro lehibe izay nandrasantsika dia ny fankalazana ny fetim-pirenentsika malagasy izay ho atao ao amin'ny Via delle Industrie, 17 - Settala (MI). Ho atolotray tsy ho ela ny fandaharampotoanan`io andro io. Aza misalasala ary ianareo satria misy fetrany ny tapakila ary mifarana amin'... tohiny
Fetin'ny Fahaleovantena malagasy any Reggio Emilia.
Ho antsika tapaka sy namana rehetra, Hafaliana ho anay Malagasy atý amin'ny faritra avaratr'i Italie no manasa antsika rehetra hiaraka hankalazana aminay ny faha-59 taona ny nahazoantsika ny fahaleovantena. Tongava maro, miandry anareo izahay. Soeur Françoise.tohiny
Hazakazaka 5 km ho fanohanana ny Fikambanana Tetezana Onlus.
Manasa antsika indray mba handray anjara amin'ny "Maratona di Roma 5km" amin'ny alahady 7 aprily 2019. Afaka mihazakazaka na koa mitsangatsangana. Ny adidy sy fanatahanjantena ho vita, ny fahafinaretana ho azo Ny vola azo amin'ny vidin'ny tapakila dia alefa manontolo any Madagasikara hatrany... tohiny
Fampirantiana saripika ataon'i Patrizia Schifano
Hanomboka amin'ny 26 febroary ka hatramin'ny 3 martsa 2019 dia hisy varotra-fampirantiana saripika, sangan'asan'i Patrizia Schifano eto Roma ka hanasana antsika rehetra hitsidika izany. " Salama Vazaha, benvenuto ricco straniero " no lohahevitr'izy ity, maneho ny fahitan'ny Malagasy ireo vahiny/... tohiny
Ny Fikambanana Tetezana Onlus mitety sekoly mampahafantatra an'i Madagasikara.
Araka ny anarany dia miezaka ho tetezana mampifandray an'i Madagasikara sy Italia ny fikambanana Tetezana Onlus . Ny fanabeazana moa no tena ifantohan'ny fikambanana ka ankoatra ny fandraisana an-tànana ny fandefasana an-tsekoly sy fanaraha-maso akaiky ireo ankizy any Madagasikara - izay tsy... tohiny
Fifampiarahabana taona vaovao : Fisaorana avy amin'ny Masoivoho
Vita soa tamin'ny alahady 10 febroary teo ny fety fifampiarahabana amin'izao taona vaovao 2019 izao ka indro ampitaina amintsika eto ny fisaorana avy amin'Andriamatoa Mpiandraiki-draharaha sy ny Mpiara-miasa rehetra eto amin'ny Masoivoho, ho an'ny malagasy mpiray Tanindrazana, na ny teto Roma sy ny... tohiny
Fanasana fifampiarahabana taom-baovao 2019 any Italia avaratra.
Ity izany ny hafatra nampitain'i Sr Françoise, isan'ny manentana ny Malagasy any amin'ny faritr'i Reggio-Emilia any. Ka dia manantena fa ho maro ianareo no hifanotrona amin'io asabotsy 26 janoary io. Mba hahamora ny fikarakarana dia fiaraha-misakafo any amin'ny Pizzeria no hatao rehefa vita ny... tohiny
Firariantsoa nalefan'ny Mpiandraiki-draharaha ao amin'ny Masoivoho ho an'ny Malagasy eto Italia.
Noho izao fahatongavan'ny Taona vaovao 2019 izao, hono tompoko, dia indro ny Fiarahabana sy Firariantsoa ho an'ny Malagasy rehetra monina eto Italia.tohiny
Fandraisan'ny kardinaly ny paroasy San Gregorio Barbarigo notendren'ny Papa ho azy.
Tontosa omaly ny fandraisan'ny Kardinaly Désiré Tsarahazana ny paroasy notendren'ny Ray Masina ho azy dia ny eglizin'i San Gregorio Barbarigo eto Roma. Ny fanendrena azy ho tompon'io paroasy io dia fanamafisana ny maha-mpiara miasa akaiky azy amin'ny Papa fa tsy hoe mijanona eto Roma hiasa izy... tohiny
Sakafom-pihavanana karakarain'ny Fikambanana Tetezana Onlus
Ny Fikambanana Tetezana Onlus dia faly manasa ny Malagasy rehetra amin'ny sakafom-pihavanana izay hatao ny zoma 21 desambra amin'ny 6 ora sy sasany hariva ao amin'ny paroasin'i San Stanislao, viale Rolando Vignali 15 (zona Tuscolana/Cinecittà). Ny vola azo amin'izany dia entiny manampy hatrany ireo... tohiny